ပြည်ပတင်ပို့မည့် အေးခဲငါး ထွက်ကုန်များ တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက် ရောဂါ ပါဝင်မှုမရှိစေရေး အတွက် RT-PCR စက်ဖြင့် စစ်ဆေး နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည် – Agri Digit News
Posted on 2021-09-29 2021-09-29 Author adminComments Off on ပြည်ပတင်ပို့မည့် အေးခဲငါး ထွက်ကုန်များ တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက် ရောဂါ ပါဝင်မှုမရှိစေရေး အတွက် RT-PCR စက်ဖြင့် စစ်ဆေး နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးထုတ်ကုန်များ အနေဖြင့် အာဟာရပြည့်ဝရေး နှင့် အစားအစာ ဘေးကင်း လုံခြုံရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း၊ ပြည်ပပို့ကုန်များ အတွက် ဈေးကွက်က သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီရေး၊ FAO, WHO နှင့် GACC တို့၏ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေး နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကန့်သတ်ချက်များ ၊ ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် တလျှောက်၏ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိုက်နာ ကျင့်သုံး ရမည့် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အညီ တိကျစွာ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့ထုတ်လုပ်လိုက်သည့် ကုန်ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေး ကို အာမခံချက်ကောင်း ပေးနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းကြစေ လိုကြောင်း စက်တင်ဘာလ (၂၉)ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက Video Conferencing စနစ် ဖြင့်ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် ရေထွက် ပစ္စည်းများ တင်ပို့သည့် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကြီး က ဆွေးနွေးပြောကြား သည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရေထွက် ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ပို့ကုန် လုပ်ငန်းရှင် များ အသင်း နှင့် ညီနောင်အသင်းများ မှ တာဝန်ရှိသူများ လုပ်ငန်းရှင်များ ပါဝင် တက်ရောက် ဆွေးနွေးကြသည်။
ပြည်ပတင်ပို့မည့် အေးခဲငါးထွက်ကုန်များ တွင် ကူးစက်ရောဂါ ပါဝင်မှုမရှိစေရေး အတွက် ငါးတင်ငါးချ ဆိပ်ကမ်းများ ၊ စက်ရုံများရှိ အလုပ် သမားများ နှင့် ပစ္စည်းထုပ်ပိုးသည့် ဝန်ထမ်းများ အား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးအဖြစ် Rapid Testkit ဖြင့် စစ်ဆေး၍ မှတ်တမ်းများ ထားရှိ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ ယခုအခါ တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၊ အကောက်ခွန် အထွေထွေအုပ်ချုပ်မှု အာဏာပိုင် အဖွဲ့ (GACC) ၏ တောင်းဆိုချက်အရ ပိုမိုတိကျသည့် RT-PCR စက်ဖြင့် စစ်ဆေးပေးနိုင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိရာ RT-PCR စက်ကို လုပ်ငန်းရှင်များ ၏ ကူညီဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ရေး နှင့် ရောဂါစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းအား ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန က သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် ယနေ့ဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ ၊ နော်ဝေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး နှင့်တွေ့ဆုံ မြန်မာ့ရေသယံဇာတဖွံ့ဖြိုးရေးဆွေးနွေး။
Posted on 2020-02-27 2020-02-27 Author admin
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သူ သည် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးကျော်မင်းဦး နှင့် ဦးစီးဌာနများ မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီက ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံသည်။
အလယ်အလတ်အဆင့် မွေးမြူရေးပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးရန် နှင့် တန်ဖိုးမြင့် မွေးမြူရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်
Posted on 2021-03-21 2021-03-21 Author admin
စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကိုအခြေခံသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို ခေတ်မီနည်းစနစ်များ ဖြင့် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီး အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများကိုလည်း ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် တည်ဆောက်ရေး ဟူသော စီးပွားရေး ဦးတည်ချက်အား လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန က အားထုတ်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိရာ အာဟာရပြည့်ဝသော တန်ဖိုးမြင့် မွေးမြူရေးထွက်ကုန် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ၊ ကျေးလက်နေပြည်သူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ရေး နှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအခြေခံ ကုန်ချောထုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းများ ထွန်းကားလာရေး တို့အတွက် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များ ၊ ဘဏ်များ နှင့် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ တောင်သူများ အကြား ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသကဲ့သို့ ဒေသတွင်း မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ တိုးတက် မြင့်မားရေး အတွက် ကျွမ်းကျင်သော အလယ်အလတ်အဆင့် မွေးမြူရေးပညာရှင်များ Read More…
စိုက်ပျိုးရေး၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့မည့် အေးခဲငါး ထွက်ကုန်များတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ ပါဝင်မှု မရှိစေရေး Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ဆွေးနွေး